Olona phawu lubalulekileyo kwiBhlog yakho yeShishini | Martech Zone
Olona phawu lubalulekileyo kwiBhlog yakho yeShishini
NgoLwesithathu, Aprili 29, 2009 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Ngokuhlwanje bendonwabile Ukudibana, umcimbi wokunxibelelana waseIndiya, apho sidibanise kwakhona iqela ukuze sithethe kwi Izinto ezenziwayo kunye nezingenziwayo kwiBlog Blog. Ndandijoyina nabanye oochwephesha kumzi mveliso uRhoda Israelov, uRodger Johnson, UKyle Lacy kunye noKevin Hood.
Kwakukho iyantlukwano encinci kwisivumelwano ngaphezulu komyalelo kunye nolawulo lwebhlog yendibaniselwano, kodwa ndiyakholelwa ukuba sonke savuma ngokungagungqiyo ukuba ukubhloga, njengesixhobo esiphakathi, kuya kuba sisicwangciso esibaluleke kakhulu (kwaye mhlawumbi sinenzuzo) kune-imeyile yeofisi. Ngawo la amazwi am - ayingawo lawo epaneli.
host UErik Deckers ivale incoko ngombuzo:
Leliphi elona candelo libalulekileyo leengcebiso ekufuneka wonke umntu alikhumbule xa eqala ibhlog yakhe?
Ukuvala ipaneli ngaphandle, ndavuma nabanye ukuba konke kuqala ngophando lwamagama aphambili, umxholo omnandi, ukubhala malunga nabathengi bakho, kunye nokunyaniseka nokungafihli nto. Zonke iimpendulo zazingumgangatho wokuqala, ke ndaye ndathatha ithuba lokuvala ngokukhumbuza wonke umntu ukuba kufuneka kubonakale, kulula indlela yokuzibandakanya kwibhlog.
Andinakukuxelela ukuba ndityelele kangaphi ibhlog kwaye ndinomdla wokudibana nebhlogi esemva kwayo, okanye ndithenga imveliso okanye inkonzo, kodwa akukho nto icacileyo kwiphepha elindikhomba kwicala elilungileyo. Yonke ibhlog yeshishini kufuneka ibe negama, ifom yoqhakamshelwano, inombolo yefowuni, idilesi- kunye neefowuni ezimbalwa eziyilelwe kakuhle ezenza ukuba zinike ithuba lokubhalisa kunye nokunxibelelana nenkampani.
Kukho nezinye akuqinisekanga iingxoxo kwiwebhu iGoogle nokuba ichola iisayithi ezidwelise idilesi yazo yeposi kwindawo yazo. Ngokujolisa kuGoogle ngokuthembela ngakumbi nangakumbi, iyavakala into yokuba indawo enedilesi yesitalato esebenzayo inokuthenjwa ngaphezulu kweyodwa ngaphandle.
tags: blogkublogaumnxeba kwisenzoguqukactamaphepha
Sebenzisa i-Twitter ukuFumana ukuKhokela
Ividiyo: I-Twitter kubomi bokwenyani